(War)-26/11/2021-Jimco-AminaWehelie.Me- Nooca covid 19 ee loo baxshay NU ayaa soo gaaray Yurub, waxaana laga helay qofkii ugu horeeyey oo ku nool dalka Belgium-ka.
Shaybaarka kulliyadda Leuven ayaa heshay nooca NU ee tirsigiisa shaybaar laga dhigay B.1.1.592, ka dib markii 22-kii bishaan November gabar dhaliyaro ah oo aan talaalneynin laga helay.
Wasiirka Caafimaadka ee Belgemka Frank Vandenbrouche ayaa sheegay in wax lala argagaxo aneey jirin, hase yeeshee loo baahan yahay in la digtoonaado, waayoo buu yiri: Ma hubno in uu yahay nooc khatartiisu darran tahay.
Gabadha laga helay, ma talaalna, horeyna xitaa xanuunku uguma dhicin, iminkana xanuun siyaado ahi ma hayo, waxeey uun isku aragtay astaamaha hargabka muddo 11-maalmood ah ka dib markeey u safartay dalka Masar iyadoo xilligaa ka tagtay Turkey.
Sources: The Times.
Previous Adeegga tareennada Aadda gobollada oo istaagay:
Next Dufaanta Arwen ayaa dishay qofkii saddexaad: